बागलुङ नपाको बजेट साढे पन्ध्र करोड « प्रशासन
बागलुङ नपाको बजेट साढे पन्ध्र करोड
बागलुङ । बागलुङ नगरपालिकाले आगामी आवको लागि रु. १५ करोड ५० लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाको २२ औँ नगर परिषद्ले आव २०७४-०७५ को आयव्यय मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो ।
परिषद्को निर्णयअनुसार चालुतर्फ रु. दुई करोड ५० लाख र पुँजीगततर्फ रु. १३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा पूर्वाधार निर्माण, सरसफाइ र कृषि तथा पर्यटन विकासका लागि प्राथमिकता दिइएको नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत युवराज अधिकारीले बताए ।